Hi! Nice to meet you all! — MYSTERY ZILLION
I'm so glad to participate with you.
I have finished UCSY. So I am very interesting about globalization.:67:
Your member is very good .You know.
One of your member guide me this forum. So I join.
If I doalittle mistake, realize me.OK.
Friend all are welcome.
အော်စကားမစပ် ကျွန်တော်လဲ ucsy ကပါဘဲ။
Mz မှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ :6::6: သိတာများကို ဝေမျှပြီး မသိတာများကို မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
တက်လူ wrote: »
ရှိတာလေးတေမျှကျွေး အဲလေ.. မသိတာလေးတွေမေးလို့ရပါတယ်.. သိတာလေးတွေလဲ ၀င်ဖြေပါ ခင်ဗျာ ...:6:
Your Welcome. Let's discuss.
Warmly Welcome to MZ because MZ has no aircon. Even if MZ has aircon, there is no power. If you have something difficulty please feel free to contact Mr. DBA @ ကိုဒုတ်ခွ, but if you have something to eat, then call me immediately.
ISTEIN (The most handsome member in MZ)
Share လုပ်မယ့်လူတစ်ယောက်တော့တိုးလာပြီ ucsy ကတဲ့
လုပ်ပြန်ပြီ။ ကိုစိုင်းစိုင်းhttp://www.saturngod.netလောက် ချောရင်တမျိုး။
ကိုညမီးအိမ် သူ့ကိုကော ယောကျ်ားလေးထဲမရွှေ့ဘူးလားဂျ။ ဖိုက်တာနာမည်ဆိုဒါယောကျ်ားလေးပဲ။ သေဂျာဒယ်။ မိုးကောင်းကင်တိုက်ခိုက်သူ ကိုတွေ့ရတာ ဝမ်းသာတယ်နော်။ ဒီမှာက အဖြူရောင်နယ်မြေလေ။ အဲဒီဓါးကြီးချလိုက်နော်။ :d